के आईपीएल कपाल हटाउन राम्रो काम गर्दछ? तपाइँलाई चाहेको परिणाम दिनुहोस्। - कम्पनी समाचार-शेन्जेन नोबल स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड।
के आईपीएल कपाल हटाउन राम्रो काम गर्दछ? तपाईलाई इच्छित परिणाम दिनुहोस्।
समय: 2019-11-19 हिट्स: 3
यदि तपाईं नोबल आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईले नतिजा चाँडै नै देख्न थाल्नुहुनेछ - र पहिलो चार उपचार पछि, लामो समयसम्म चल्ने सहजता तपाईंको हुनुपर्छ।
पहिलो चार उपचार पछि तपाईसँग hair हप्ता सम्म कपाल हटाउने स्वतन्त्रता हुन्छ।
रेग्रो गर्ने केश पातलो र नरम हुन्छ।
हामीसँग केहि धेरै सन्तुष्ट ग्राहकहरू छन्! यहाँ उत्पाद पृष्ठ मा हाम्रो समीक्षा पढ्नुहोस्।
जब उपचार तालिका अनुसरण गर्दै, खुट्टामा नापीएको, तेस्रो उपचार पछि, व्यक्तिगत नतिजा फरक हुन सक्छ।
के आईपीएलले शरीरको कपालको सबै प्रकारहरूमा काम गर्दछ?
तपाइँ नोबल आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण तपाइँको खुट्टा, अन्डररम्स, बिकिनी रेखा र अनुहारमा कपाल हटाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो शरीरको विभिन्न क्षेत्रका लागि विभिन्न वक्र संलग्नताहरूको साथ आउँदछ, त्यसैले प्रत्येकको सही तरीकामा पुग्न र उपचार गर्न सजिलो हुन्छ। पाँच वर्गीकृत लाइट सेटिंग्स र स्मार्टस्किन सेन्सरको मतलब यो हो कि तपाई सँधै यो सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको छालालाई चाहिने कोमल उपचार पाउँदैछ।
समय: legs..8.5 मिनेट तल्लो खुट्टाको उपचार गर्न।
कपाल घटाउने सन्तुष्टि दर: खुट्टाको लागि% 83%।
बिकिनी क्षेत्र अनुलग्नक: अधिक नाजुक-घुमाइएको डिजाइन र पारदर्शी फिल्टरले हार्ड-टु-पहुँच क्षेत्रहरूको प्रभावी उपचारको लागि अनुमति दिन्छ। फोकसको कडा दायराका लागि cm सेमी २ विन्डो आकार।
समय: बिकिनी क्षेत्रको उपचार गर्न २ मिनेट।
कपाल घटाउने सन्तुष्टि दर: ini 78% बिकिनी क्षेत्रका लागि।
अंडरआर्म अनुलग्नक: जब तपाईं यो विशेष-घुमाविएको संलग्न प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने कुनै कपाल छोड्दैन। फेरि, cm सेमी २ विन्डो आकारले कडा र बाक्लो कपालसँग सहि व्यवहार गर्दछ।
समय: अण्डर आर्म्सको उपचार गर्न २. minutes मिनेट।
कपाल घटाउने सन्तुष्टि दर: erar% अन्डररम्सका लागि
जब कर्डर्ड प्रयोग गरिन्छ, उच्चतम उर्जा सेटिंगको लागि समय संकेत।
नेदरल्याण्ड्स र अष्ट्रियामा 46 women महिलाको साथ अध्ययन गरिएको, बगल, बिकिनी, खुट्टामा treat उपचार पछि अनुहारमा २ उपचार पछि।
घरमा कसले आईपीएल कपाल हटाउन कोसिस गर्न सक्छ?
एउटा प्रश्न हामीले धेरै सुन्दछौं "के आईपीएलले मेरो छाला / कपाल टोनमा काम गर्दछ? आईपीएल कपाल हटाउने केश कपाल र छाला टोन को एक विस्तृत श्रृंखला मा धेरै अपवाद संग प्रभावकारी छ:
तपाईले चार्टबाट देख्न सक्नुहुनेछ, नोबल आईपीएल कपाल हटाउने यन्त्र जस्ता आईपीएल उपकरणहरूले गाढा गोरा, खैरो, र कालो कपाल, र धेरै छालाको छायाँमा धेरै गाढा टोनहरू बाहेक राम्रोसँग काम गर्दछन्।
आईपीएल कस्तो छ? के आईपीएलले चोट पुर्‍यायो?
सरल शब्दमा भनौं, होईन - यसले चोट गर्दैन। नोबल आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण कोलिनिकल परीक्षणको माध्यमबाट २,००० भन्दा बढी महिलाहरूसँग गए ताकि यो सुनिश्चित गर्न सक कि यसलाई कोमल र प्रयोग गर्न सजिलो छ। धेरै प्रयोगकर्ताहरूले प्रत्येक फ्ल्यासको साथ हल्का तातो सनसनी रिपोर्ट गर्थे, तर त्यो मात्र हो। यो नै एक कारण हो जुन विश्वमा १ 2,000 लाख महिलाले आईपीएल प्रयोग गरिरहेछन्: कसले दु: ख-मुक्त, लामो कपाल हटाउने कुरा गर्न सक्दिन?
कुञ्जी तपाईंको घर आईपीएल कपाल हटाउने उपकरणमा सही प्रकाश गहनता सेटिंग प्रयोग गर्नु हो। त्यहाँ छनौट गर्न पाँच छन्, र एक उपयोगी गाईड प्याकमा समावेश छ तपाईलाई आफ्नो छालाको टोन र कपालको रंगको लागि सही सेटिंग फेला पार्न मद्दत गर्न।
कुनै ट्वीन्जेसबाट बच्न, ध्यानपूर्वक प्रयोग दिशानिर्देशहरू पालना गर्नु उत्तम हो। घर आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण प्रयोग गर्नु अघि क्षेत्र दाढी गर्नुहोस् र उही क्षेत्र बारम्बार फ्ल्याश गर्नबाट बच्नुहोस्। र, तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, भाँडामा वा चिडिएको छाला, ट्याटू, संक्रमण, वा जलेको आईपीएल (वा कुनै अन्य कपाल हटाउने उपचार) प्रयोग नगर्नु उत्तम हो।
अघिल्लो: परियोजना व्यवस्थापन भनेको के हो?
अर्को: छाला र कपाल हटाउने आधारभूत ज्ञान